Wariye Axmed Xassan Cawke oo ku geeriyooday magaalada Jigjiga – SHABAKADA HIIRAAN XOG
HomeWararka SoomaaliaWariye Axmed Xassan Cawke oo ku geeriyooday magaalada Jigjiga
17/11/2015 Wararka Soomaalia 0
Axmed Xasan Cawke oo ahaa wariye rug-cadaa ah ayaa lagu soo waramayaa inuu saaka ku geeriyooday magaalada Jigjiga ee xarunta dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya.
Sida ay sheegayaan wararka Axmed Xasan Cawke ayaa maalmihii u dambeeyay xanuuno yar ay hayeen, waxaana saaka waabarigii uu u geeriyooday xanuun dhanka wadnaha ah.
Wararka ayaa intaa ku daraya in Cawke uu muddooyinkii u dambeeyay ku sugnaa Jigjiga, isla markaana horay uga tagay magaalada Hargeysa.
Axmed Xasan Cawke ayaa u soo shaqeeyay laanta afka Soomaaliga ee Idaacadaha BBC’ iyo VOA’ waxaa uu mar soo noqday wariyihii gaarka ahaa ee Madaxweynihii hore Maxamed Siyaad Barre.
Sidoo kale waxaa uu ka shaqeeyay telefishinkii Soomaaliya, waxaana lagu xusuustaa tabintii ciyaarihii gobolada iyo horyaalada kubadda cagta, waxaa uu ahaa wariye madadaale badan.
Allaha u naxariistee Wariye Axmed Xasan Cawke ayaa muddooyinkii dambe ka soo shaqeeyay Telefishinada Soomaalida, sida Telefishinkii Universal TV’ Hon Cable TV iyo Telefishinka Somaliland National TV.
Alle iyo raxmo Axmed Xasan Cawke janadi fardowso alle haka warabiyo amiin yarabi.
Guddi Xaqiiqo Raadin ah oo ka socda dowlada oo la filayo in ay Garaan degmada BeledXaawo,ee Gobolka Gedo,